Shir ku saabsan körkortka oo ka dhacay Malung-Sälen | Somaliska
Degmada Malung-Sälen ayaa lagu qabtay shir ku saabsan sidii ay Soomaalidu ku qaadan lahaayeen Laysanka baabuurta (Körkort) kaasoo lagu barayo Soomaalida luuqadooda. Shirka ayaa waxaa ka soo qeyb galay maamulka ABF ee magaaladaas iyo Madaxa Isdhexgalka. Casharada Teoriga ayaa la bixin doonaa axad kasta oo uu bixin doonaa qof Soomaali ah. C/Nasiir C/Rashiid oo u qaabilsan kamuunka xaga soo dhaweynta Soomaalida ayaa ii sheegay in koorsadaan ay ka soo qayb gali karaan qofkasta oo Soomaali ah oo ay ku soo dhaweynayaan.
Degmada Malung-Sälen ayaa lagu qabtay shir ku saabsan sidii ay Soomaalidu ku qaadan lahaayeen Laysanka baabuurta (Körkort) kaasoo lagu barayo Soomaalida luuqadooda. Shirka ayaa waxaa ka soo qeyb galay maamulka ABF ee magaaladaas iyo Madaxa Isdhexgalka.
Casharada Teoriga ayaa la bixin doonaa axad kasta oo uu bixin doonaa qof Soomaali ah. C/Nasiir C/Rashiid oo u qaabilsan kamuunka xaga soo dhaweynta Soomaalida ayaa ii sheegay in koorsadaan ay ka soo qayb gali karaan qofkasta oo Soomaali ah oo ay ku soo dhaweynayaan.
Hooyo Swedish ah oo sheegtay in gabadheeda si qarsoodi ah loogu kexeeyay Soomaaliya
aweys maxamed ciise says:
waan ku salamaya walaal waana ku faraxsanah arinta shorkutka iyo sida oo u jeceshahay in aat umada u daneyso waa u baahanbahay in aan dego meshaas waxaana kaa cotsanayaa faahfahin dheraat ah waxaan kaa cotsanyaa in aat iisoo qorto wiilka mesha degan telkiisa cabdi naasir ii soo dir telkaga
ali bucul says:
March 4, 2011 at 21:08
waa arin aad iyo aad loogu baahan yahay . waxaana idinka codsanaynaa inaad gaadhsiisaan dhamaan gobolada dalka oo dhan . waad mahadsan tihiin.
Aweys walal Wan ku salamay. Wana ku so dhaweyneynaa.
Ali adigane salan sare sxb. Degmoyinka kale wan garsiineynaa waa hadii ay ayaga kaga go antahay. Somali wax barta ma jeclo lkn lacag ku qata wa ay jeceyl yihin. marka Kommunki lagu arko dadaal waan garab istageynaa
Asc walaal aad ayaa u mahadsantahay inte ka heli kara qof iga caawinaayo adoo mahadsantahay fadlan isodir meel aan kala xariiro
walal waa mahad san tihiin dadka cawinayo dadka somaliyeed marka walalo wixii aqbaar ah iigu soo dir imeelkan tack så mycke
May 4, 2011 at 18:12